Shiinaha: Muslimiinta Uighurs-ka oo lagu qasbo in ay cunnaan doofaarka, cabaana khamriga… – Hagaag.com
Shiinaha: Muslimiinta Uighurs-ka oo lagu qasbo in ay cunnaan doofaarka, cabaana khamriga…
Posted on 10 Febraayo 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Dadka Muslimiinta ee Uighurs ee deggen gobolka Turkistan Bari (Xinjiang) galbeedka fog ee Shiinaha ayaa sheegay in ay ku qasban yihiin in ay cunaan hilibka doofaarka iyo in ay cabaan khamriga, inta lagu guda jiro fasaxa sanadka cusub ee Shiineeska oo loo yaqaano (sanadkii Doofaarka).
Muslimiinta Shiinaha ee gobolkaasi ayaa la kulma mararka qaar rabshado, waxaa ay sheegeen in lagu martigeliyey casho sanadeedka Shiineeska, waxaa loo soo bandhigay hilib doofaar iyo khamri, sida lagu sheegay warbixin uu faafiyey raadiyaha Aasiyada xurta ah iyo sidoo kale laga soo xigtay wargeyska Ingriiska ee Daily Mail.
Waxay tilmaameen in mas’uuliyiinta Shiinaha ugu hanjabeen in loo diri doono xeryaha dhaqan celinta hadey diidaan in ay ka soo qeybgalaan.
Muwaadin dadkaasi ka mid ah ayaa sheegay laga bilaabo sanadkii la soo dhaafay dadka qaar waxay ku qasbanaadeen in ay cunaan hilibka doofaarka si ay u muujiyaan in ay ka dhabeeyeen isdhaxgalka Shiinaha kana fogaadaan ciqaab.
Bishii Agoosto ee la soo dhaafay ayaa koox Qaramada Midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha soo weriyey in Shiinaha uu ku xiray hal milyan oo Muslimka Uighurs-ka ee laga tirada badan yahay xeryo qarsoodi ah ee Bariga Turkistan si loo dhaqan celiyo.
Laakiin Beijing ayaa beenisay eedeymaha waxayna sheegtay in ay jiraan “xarumaha tababarka xirfadaha” si ay ula dagaallanto Islaamka “xagjirka ah.” Waxay sidoo kale ku nuuxnuuxsatay, in tallaabooyinka ammaanka ee Xinjiang ay lagama maarmaan yihiin ee la dagaalanka xagjiriinta ee ma aha mid loogu talagaley koox ama qowmiyad gaar ah.
Dhinaca kale Turkiga ayaa ku sheegay macaamilka Beijing ee dadka Muslimiinta Uighurs ee laga tirada badan yahay ay ku tahay ceeb aadanaha, taasi oo ah jawaabtii ugu horeysay oo dowlad Muslim ah bixiso iyada oo ka dhiidhineyso cadaabka lagu hayo dadkaasi, iyada oo dhinaca kale hay’adaha xuquuqda aadanaha ay cambaareeyeen.
Tan iyo sanadkii 1949, Shiinaha ayaa gacanta ku hayey gobolka Turkistan Bari oo ay deggen yihiin Muslimiinta Uighurs oo asalkooda Turkidu yahay, wuxuu Shiineeska ku wacaa gobolka Xinjiang oo ah xuduudii cusbeyd.
Tirakoobka rasmiga ayaa sheegaya in 30 milyan oo muwaadiniin Muslimiin ah ay ku nool yihiin, 23 milyan ka mid ah waa Uighurs-ka, inkastoo warbixino aan rasmi aheyn lagu sheegay in cadadka Mulimiinta uu gaarayo 100 milyuun ama wax u dhigma 9.5% dadweynaha Shiinaha.